January 3, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Barcelona oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Huesca oo ay booqatay… +SAWIRRO
Cayaaraha January 3, 2021
(Spain) 04 Jan 2021. Barcelona ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Huesca oo ay ku booqatay garoonkeeda Estadio El Alcoraz, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada Toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1ay ku hoggaamineysay kooxda Barcelona. […]Sii akhriso
Dad shacab ah oo duleedka magaalada xuddur uga geeriyooday walxo qarxa oo meel duur ah kula kacay
Soomaaliya January 3, 2021
Sadax qof oo shacab ah oo mid ka mid ah dumar tahay ayaa duleedka tuulada Gaabaneey oo hoos tagta degmada Xudur ku geeriyoodey ka dib markii ay la kacday walxa qarxa oo meel duur ah ay ka soo qaadeen sida ay xaqiijiyeen ehelada dadka geeriyooday oo meesha ka dhawaa Lama oga nooca walxaha qarxey mana […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Huesca iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
(Spain) 03 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Huesca iyo Barcelona horyaalka La Liga ayaa la shaaciyey. Kooxda Huesca ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Barcelona si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Huesca iyo […]Sii akhriso
Kooxda Manchester City oo garoonka Stamford Bridge guul weyn kaga soo gaartay Chelsea… + SAWIRRO
(London) 03 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa Chelsea guul weyn oo 3-1 ah kaga soo gaartay Chelsea, garoonkeeda Stamford Bridge. Kooxda Manchester City ayaa goolal deg deg ah ku bilowday Chelsea oo ay marti u ahayd kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana goolka hore u daah furay 18’daqiiqo Ilkay Gundogan, kaddib […]Sii akhriso
Turkish families mourn lives lost in Somali attack – Anadolu Agency
Somali News January 3, 2021
Turkish families mourn lives lost in Somali attack Anadolu Agency 5 killed, in suicide attack in Somali capital Jefferson City News Tribune Several people killed in attack on Turkish company in Somalia Al Jazeera English Suicide attack in Somali capital kills several, including Turkish citizens TRT World Somali PM offers Sii akhriso
Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqday Xarunta Ciidanka Danab ee Balli-doogle “SAWIRRO”
Balli-doogle-(SONNA)- Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta safar shaqo oo lagu dhiirigelinayo ciidanka Xoogga dalka ku tagey Balli-doogle oo ka tirsan Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku howlgalaan Ciidanka Kumaandooska Danab Guutada 16-aad. Ra’iisul Wasaaraha oo xogwareysi la yeeshay ciidanka, ayaa Sii akhriso
Saraakiisha ciidamada Talyaaniga iyo spain ee jooga Soomaaliya oo qalab isboortis gudoonsiiyey ciyaartowda Gobolka Banaadir
MUQDISHO-(SONNA)-Saraakiisha Ciidamada Talyaaniga iyo spain ee ku sugan Soomaaliya ayaa maanta waxaa ay qalab isboortis guddoonsiiyeen ciyaaryahanada xulka gobolka Banaadir ee dhawaan ku guuleystay. Munaasabada qalabka lagu siinayey ciyaartowda goblka Banaadir oo ka dhacay Safaaradda Talyaaniga ee Muqdisho, ayaa waxaa lagu dhiirigalinaayey ciyaaryahanada xulka Gobolka Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka adage e Kooxaha Chelsea iyo Man City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(London) 03 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Chelsea iyo Manchester City horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda West Chelsea ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Manchester City si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan […]Sii akhriso
Ka hor kulankeeda caawa Man City oo xaqiijisay in mid ka mid ah xiddigaheeda laga helay Korona Fayras
(Manchester) 03 Jan 2021. Ka hor kulankeeda ay caawa la leedahay naadiga Chelsea, kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah xiddigaheeda laga helay caabuqa saf mareenka ah ee Korona Fayras. Manchester City oo caawa booqanaysa galbeedka Magaalada London halkaasoo ay kulan tirsan horyaalka Premier League kula soo ciyaareyso Blues ayaa […]Sii akhriso
Madaxweynaha Hirshabeelle oo guddoomiyey shirka golaha wasiiradda Hirshabeelle.
Jowhar-(SONNA)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen, ayaa shir guddoomiyey shirka Golaha Wasiirada Hirshabeelle oo maanta warbixino looga dhageystay wasiirada Wasaaradaha Qorsheynta, Dib u heshiisiinta iyo Amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wasiirka Wasaarada amniga ayaa ka warbixiyey howlgalo lagu xoojinaayey amaanka oo hey’adaha Sii akhriso